Hab Cusub oo Lagu Soo Kordhinayo Xawaaladaha
Lacagta xawaaladaha ee laga diro dibadaha ayaa qeyb muhim ah kaga jira dhaqaalaha dalal badan oo soo koraya, gaar ahaan Soomaaliya, oo deeqaha shisheey, iyo lacagaha maalgashiga labadaba lagu diro xawaalad.
Laakiin dadka fallanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa ka digaya ahmiyadda adeegga xawaaladda aaney si wanaagsan u fahamsaneyn hey’adaha shisheeye ee dejiya xeerarka lacagta iyo Bangiyada, taasoo halis gelineysa baraaraha iyo nolosha malaayiin qof.
Sida uu London kaga soo waramayo Henry Ridgwell farsamo cusub oo casri ah ayaa balaarineysa suuqa xawaaladaha iyadoo yareyneysa lacagta wax lagu xawillo. Ibrahim Xassan Dandurey ayaa inoo haya warbixinta.
Dhageyso Hab Cusub o Xawaladaha